ပညာတတ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပညာတတ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ…
Posted by manawphyulay on Mar 1, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
မနေ့က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြတဲ့ ဥပမာလေးကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ သူကတော့ ခုလက်ရှိစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ရပ်တည်မှုတစ်ခုရရှိနေတဲ့ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီတဲ့။ တစ်ချိန်တုန်းက သူ ၁၀ တန်းအောင်စဉ်က အစိုးရ၀န်ထမ်းအဖြစ် ရရှိအောင် ကြိုးစားနေတုန်းမှာ ၀န်ထမ်းဘ၀နဲ့ နေတဲ့အထက်လူတွေက တစ်ဦးပြီး တစ်ဦး ထွက်နေကြတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ သူ စဉ်းစားတယ်ပေါ့လေ.. ငါက ၀င်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ သူတို့ ဘာကြောင့် ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာလဲ… ဒီတော့ မဖြစ်သေးဘူး ငါ မ၀င်သေးပဲ နေကြည့်ဦးမယ်ပေါ့ အဲလိုနဲ့ နေလာခဲ့တာ ခုလက်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သာလာတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်း မလုပ်ခဲ့ရဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ သူက လူငယ်တွေ သင်တန်းတွေတက်ကြ တစ်ခုပြီးတစ်ခုသာ တက်နေတယ် အလုပ်ကို ရရှိနိုင်ဖို့ မကြိုးစားကြတာတွေလည်း တွေ့ရှိရတယ်တဲ့။ သူ ဥပမာလေး တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်တဲ့။ ကိုလိုနီခေတ်က ဘုရားကျောင်းမှာ ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦး ရှိပါတယ်။ သူဟာ အမြဲ ခေါင်းလောင်းထိုးတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်ကိုင်လာနေရင်းနဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ အသင်းတော်က စည်းကမ်းတစ်ခု ချမှတ်လိုက်ပါသတဲ့။ စည်းကမ်းကတော့ ဘုရားကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်သူတိုင်း ပညာသင်ကြားရမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ လူတိုင်းက သင်ကြားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် အဘိုးအိုခမျာတော့ အသက်ကြီးနေတော့ သင်လို့လည်း တတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ သူ့ဘာသာစဉ်းစားပြီး မသင်ဘူးဆိုပြီး နေသတဲ့။ ဒီတော့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ဘုရားကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကို အဘိုးအိုအတွက် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ပိတ်ပင်လိုက်ပါရော။ ဒါနဲ့ အဘိုးအိုလည်း အလုပ်လက်မဲ့နဲ့နေရရှာတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူဟာ ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်ချင်တော့ မနေနိုင်ဘဲ အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သူနိုင်သလောက် ပိုက်ဆံနဲ့ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ဝယ်သောက်မယ်ဆိုပြီး သွားဝယ်တော့ ဆိုင်မှာ သူသောက်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဆေးလိပ်မရောင်းဘူးတဲ့။ ဒီတော့ အဘိုးအိုက စဉ်းစားတယ်။ ငါ့လိုမျိုး လူတွေ ရှိဦးမှာပဲဆိုပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဆေးလိပ်ကိုသာ ငါ ရောင်းမယ်ဆိုရင် အတွေးဝင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ လမ်းထောင့်မှာ ဆေးလိပ်ကို တစ်လိပ်ချင်းရောင်းကြည့်တယ်။ ၀ယ်သောက်တဲ့သူများတော့ သူမှာ ငွေလေးအတော်ရွှင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ထပ်ပြီး နောက်လမ်းထောင့်မှာ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ထပ်ခွဲပြီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ချင်းဆီရောင်းပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ သူမှာ ငွေတွေစုနိုင်လာတယ်။ သူများက သူ့ကိုအကြံပေးတယ် ငွေတွေကို ဒီတိုင်းမထားနဲ့ ဘဏ်မှာစုထားရင် တိုးပွားမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ဘဏ်မှာအကောင့်ဖွင့်ပြီး ငွေစုတော့ ဘဏ်က သူ့ကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ သူက စာမတတ်တော့ လက်မှတ်မထိုးတတ်ဘူး။ ဒါဆိုလည်း ရတယ်လေ လက်ပွေနှိပ်ပေါ့ ဆိုပြီး လက်ပွေနှိပ်ခိုင်းရင်း ပြောတယ်တဲ့ ခင်ဗျား ဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေ ရှာနိုင်တာတောင် စာမတတ်ဘူးနော်။ စာများ တတ်လို့ကတော့ ခင်ဗျား ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲတဲ့ ဘဏ်စာရေးက မေးတော့ အဘိုးအိုက ဒီလို ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
“အင်း စာမတတ်လို့ ဒီလို ပိုက်ဆံတွေရှာနိုင်တာပေါ့။ စာများတတ်လို့ကတော့ ခုချိန်ဆို ဘုရားကျောင်းမှာ ခေါင်းလောင်းဆွဲနေတုန်းပဲပေါ့”
လို့ ပြောတော့ ဘဏ်စာရေး သူ့နဖူး သူ ရိုက်လိုက်မိပါတယ်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးက ခုခေတ်ကိုများ ပြောနေသလား.. လို့လည်း စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်။ မနော ကြားခဲ့တာလေး ပြန်ပြောပြတာပါနော်။
အင်း … ပညာမတတ်ဘဲ ချမ်းနေတဲ့လူတွေလည်း လောကမှာ အများကြီးပါပဲ …
ပညာတတ်ပြီး ချမ်းသာနေတဲ့ လူတွေလည်း ရှိဦးမှာပဲ …
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးတစ်ချက်က သူဋ္ဌေးဇာတ်ကို ကနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ ..
အထက်က အဘိုးကြီးက သက်သေခံနေပါတယ်တဲ့ဗျား ……….
ဘဏ်စာရေး နော် မိုက်ပါ့
သူဋ္ဌေးတွေက ပညာအများကြီးတတ်ဖို့ မလိုပါဘူး..
ဒါမဲ့ စဉ်းစားထိုးထွင်းဥာဏ် စိတ်ကူး ကတော့ ပညာတတ်သူတွေထက် အများကြီး ပိုရှိကြရပါတယ်..
အဲဒါမှ အရာအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာလေ..
မနောရေ၊ ပညာတတ်လမ်းကြောင်းမလိုက်လို့ သူဌေးဖြစ်သွားတာနဲ့ ပညာဖက်လိုက်လို့ သူဌေးမဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာလည်း ဟိုဖက် ဒီဖက် ပြောကြတာလည်း အများကြီး ကြားဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကာယကံရှင်တွေ ရဲ့ စိတ်တွေနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ စာသည် ဥစ္စာ ဆိုတဲ့ သူလည်း သူ့ခံယူချက်၊ ကျေနပ်မှုတွေနဲ့၊ ဥစ္စာသည်လောကရဲ့ ဘဝလက်တွေ့ လိုအပ်ချက် ဆိုသူတွေမှာလည်း သူ့ခံယူချက်၊ ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပါပဲ။
ဒါကို ဘယ်ဖက်ကို ပိုသဘောကျ သလဲမေးရင် အသက်အရွယ်၊ အချိန် အခါ မတူတဲ့ အဖြေရနေမယ် ထင်တယ်။ ဒါလည်း ကိုယ်အတွက်ပဲ မှန်တာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။
ဟုတ်တယ်ကျောင်းပြီး သွားတော့သင်တန်း သင်တန်းနဲ့မပြီးနုိင်တော့ဘူး အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တော့ စာရင်းကိုင် စာ၇င်းကိုင် ရပြန်တော့ကွန်ပျူတာ အော် ပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူး ဘွဲ့တခုလောက်တော့ ရနေပြိဆိုအလုပ်လုပ်လို့ရနေပါပြီဘွဲ့ရပြီးသူတွေအပေါ်က အဘ်ိုးအိုကိုအတုယူနိုင်ရင်ကောင်းမယ် သင်တန်းကအရေးမကြီးပါဘူး အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ဘဲလိုပါတယ်
တနေ့ သေကြရမည် … မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ်
ပညာနဲ့ သင်ညာခွဲခြားသိတတ်ဖို့ သာအရေးကြီးပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘွဲ့ ရတိုင်းစာတတ်ပါတယ်လို့ ပြောရမှာလား။
မှာ စဉ်းစားဆက်စပ်တွေးတောနိုင်စွမ်းနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
ကောင်းလို့ ပိုင်ဆံရသွားနိုင်ပေမယ့်. သူ့ ထက်ပိုပြီးတော့
အသိဥာဏ်နဲ့ ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်သူက ပိုချမ်းသာမသွား
မမမနောဖြူလေးရဲ့ ပို့ စ်ကနေ ယနေ့ ခေတ်ကို တန်ပြန်ဟပ်
ကျနော်နဲ့ အတူတူဆေးကျောင်းတက်ခဲ့သူတွေ လက်ထောက်
ဆရာဝန်တွေဖြစ်နေကြပီ။ကျနော်က အပြင်မှာ အိမ်က အလုပ်
တွေ ကူလုပ်ရင်း တစ်လဝင်ငွေ သူတို့ ရတာထက်(၃-၄)ဆပိုရ
သူတို့ လိုကိုယ်၌မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးလဲရခဲ့ပါလျှက်နဲ့ 
မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာ သူတို့ နဲ့ လမ်းမှာ၊လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာတွေ့ ရင်
မျက်နာငယ်ရပါတယ်။ဒါဟာ အမှန်ပါ။ပညာဆိုတာကို တကယ်
တတ်မြောက်အောင်သင်နိုင်ဖို့ သာ အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။
မနောဖြူလေးရေ ပညာမတတ်ပဲ ချမ်းသာသူတွေရှိတယ် ဥာဏ်ရည်မရှိသူနဲ့
မင်းလေးမိတ်ဆွေထားရင်တောင် စာပေ၀ါသနာမပါသူနဲ့ ထားမိလို့ကတော့
အင်း ….. အဲ့ဒီမှာ စိတ်ညစ်ရမှာပဲ ။ဘဘရဲ့ကိုယ်တွေ့လေးပါ
ခင်တဲ့ ဘကြီး ထက်ဝေး
ဒီလိုအဆင့်ဆင့်တိုင်းသာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ရင် ဥစ္စာ၊ ပညာ ရယ်တင်မဟုတ်ပါဘူး
တစ်စုံတစ်ခုအတိုင်း အသက်စွန့်တဲ့အထိ လုပ်လာကြတယ် …
(ဥပမာ .. အစွန်းရောက်ဂိုဏ်းတစ်ခုပဲဆိုပါစို့ … )နောက်မှ အကျယ်ဆက်ပြောတော့မယ်ဗျာ …
ကိုကင်းရယ် ပြောလက်စနဲ့ ဗျာ ဆက်ပါအုံး။
ဒါပေမယ့် အများစုအတွက် လူတိုင်းအတွက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပုံပြင်လေးရဲ့မူရင်းဝတ္ထု (အိုဟင်နရီရေးတာမှတ်တယ်)ကတော့ လောကကြီးရဲ့ ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်တတ်မှု့ကို သရော်ပြီးရေးတာပါ။ အရမ်းကောင်းတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပြောတာနဲ့ နဲနဲကွဲလွဲတယ်။
တကယ်တော့ ဘ၀မှာအောင်မြင်မှု့ဆိုတာကို ပေတံတမျိုးထဲနဲ့ တိုင်းလို့တော့ မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား။
ကိုယ့်ပန်းတိုင်ဆီကိုယ်ခရီးရောက်ခြင်းနဲ့သာ အောင်မြင်မှု့ကို တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ကိုယ်ကျေနပ်တဲ့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်အသီးသီးကို
မဆုတ်မနစ်ဦးတည်ကြိုးပမ်းကြဘို့သာ အဓိက ………. လို့
ပညာတတ်ပြီး ငွေရှာနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါပေမယ့် ပညာမတတ်ဘဲချမ်းသာတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိကြပါတယ်။ လူသားတွေအားလုံး ပညာတွေအများကြီးတတ်မြောက်ပြီး ငွေအများကြီးရှာနိုင်ကြပါစေ……
ပညာမတတ်ဘဲ ကြီးပွါးချမ်းသာသူများ အတွက်
အားမငယ်ရအောင် အားပေး ဂုဏ်ပြုသော
မှန်ပါတယ်ရှင်။ မနွေဦး ပြောသလိုပေါ့။ ပညာမတတ်တဲ့သူက ပညာတတ်လည်း မထူးဆိုတဲ့အတွေး ၀င်တာ မဆန်းပါဘူး။ တတ်ရင်တော့ ကွာခြားမှုတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သူ သဘောပါက်လာမှာပါ။
အားပေးသွားပါတယ်နော် မမ မနောရေ ခံယူချက်ဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့သာတိုင်းတာရင် အရာရာဟာ ကွဲပြားခြားနားသွားပါလိမ့်မယ်